Ryan Giggs Oo Kashifay SIRTII Manchester United Ka Caawisay Inay Garaaco Manchester City - Gool24.Net
Halyeygii hore ee Manchester City, Ryan Giggs ayaa sharraxay horumarka ay samaysay kooxdiisii hore labadii kulan ee ay guulaha ka gaadhay Tottenham iyo Manchester City, waxaanu tilmaamay in guulahaas ay sii wadi karayaan.
Manchester United ayaa iska caabisay dhamaan lixdii kooxood ee ugu sarreeyey horyaalka Premier League xili ciiyaareedkii tegay, waxa se ay guul-darrooyin kala kulantay Crystal Palace, Bournemouth, West Ham iyo Newcastle bilowgii hore ee xili ciyaareedka, laakiin kalsoonida ayaa usoo laabatay labadii kulan ee ugu dambeeyey.
United ayaa hadda soo fadhiisatay kaalinta shanaad ee horyaalka, waxaanay farqiga goolasha kaga sarraysaa Wolves oo ay min 24 dhibcood haystaan.
Tababaraha Tottenham, Jose Mourinho ayaa usbuucii hore sheegay in United ay u sahlan tahay in kooxaha waaweyn ay iska celiso, waxaana u markhaati furay Ryan Giggs oo ku waafaqay in kooxdiisa hore ay dareen gaar ah siiso kulamada waaweyn.
“Dhamaan kulamada waaweyn, waxaad u baahan tahay inaad feejignaan muujiso, taasina waa waxa ay ciyaartu sameeyeen (Kulankii Man City). Sidaas waxa yidhi Giggs oo warbaahinta la hadlay kaddib ciyaartii Sabtidii.
“Waxay feejignaan ka sameeyeen difaaca iyo marka ay kubadda ku guuleystaan. Way fiican tahay inaad hubiso in baaskaagu hore u socdo, taabashaduna way fiicnay, ciyaartoyguna waxay ku duulayaan Anthony Martial oo dhibaato weyn ku abuuray City.
“Dhamaanteen waan ognahay rikoodhka United ee kooxaha waaweyn, marka ay kooxaha waaweyni culays nasoo saaraan, waxaanu ku qaadnaa weerar degdeg ah (Counter-attack).”
Ryan Giggs waxa uu tilmaamay in United ay u hadhsan tahay inay baabi’iso kooxaha, gaar ahaan marka uu usoo laabto Paul Pogba oo dhaawac waqti qaatay ku maqan, waxaanu yidhi: “Tallaabada labaad waa inaanu burburino kooxaha, waana sababta aanu ugu baahanahay in Pogba soo laabto. Waa midka kaliya ee albaabka furi karaya, kooxda kusoo celin karaya inay si fiican oo joogto ah u ciyaarto, taasina waa tallaabada xigta.
“Waxay ila tahay koox kasta oo ka sarraysa United, in aanay hadda naga badin doonin”
Manchester United ayaa waxay Khamiista garoonkeeda Old Trafford ku martigelin doontaa Alkmaar kulanka ugu dambeeya ee Group L ee tartanka Europa League, laakiin waxay u baahan tahay inay guul ama barbar=dhac ka keento si ay u xaqiijisato inay kaalinta koowaad kusoo baxdo.